Kooxda AC Milan oo soo qaadanaysa laacibka Arthur (Sidee?) – Gool FM
Kooxda AC Milan oo soo qaadanaysa laacibka Arthur (Sidee?)
Raage February 7, 2018
RS - FUTEBOL/COPA DO BRASIL 2017/GREMIO X CRUZEIRO - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Cruzeiro disputada na noite desta quarta-feira, na Arena, valida pela semifinal da Copa do Brasil 2017. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
(Milano) 07 Feb 2018 – Kooxda AC Milan ayaa sida lasoo werinayo waxay amaahan doontaa laacibka khadka dhexe ee reer Brazilian-ka ah ee Arthur oo ay soo qaadanayaan isla marka ay lasoo wareegto Barcelona.
Barca ayaa loo badinayaa inay u dhowdahay qaadashada Arthur oo u safta Gremio, iyadoo Calciomercato.com iyo webab Spanish ihi sheegayaan in 22-jirkan markiiba la amaahin doono AC Milan.
Kooxda Catalan-ka ayaa waxaa horayba ugu diiwaan gashan 3 laacib oo aan u dhalanin Midowga Yurub, halka Rossoneri ay qaadan karto laba laacib oo aan MY u dhalanin.
Gol Digital ayaa sii sharaxay warka CM isagoo ku daraya inuu faahfaahiyo nooca heshiiskan amaahda ah oo uu ku sheegay mid socon doona 2 sano isla markaana ay Milan ku bixin doonto €5m oo euro.
Arthur ayaa loo arkaa mid ka mid ah laacibiinta ugu shidan ee haatan kasoo baxaya South America, isagoo Gremio ka caawiyay inay hanato Copa Libertadores sanadkii tegey, iyadoo lala xiriirinayay kooxda Inter.
RS – FUTEBOL/COPA DO BRASIL 2017/GREMIO X CRUZEIRO – ESPORTES – Lance da partida entre Gremio e Cruzeiro disputada na noite desta quarta-feira, na Arena, valida pela semifinal da Copa do Brasil 2017. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
''Waa koox wayn'' - Lautaro Martinez oo muujiyay sida uu ula dhacsan yahay kooxda Inter Milan
Woqooyiga Kuuriya oo ciyaartooy & taageerayaal usoo dirtay South Korea + Sawirro